Izincomo zokwelashwa okungokomoya – Julayi 24 2021! – JucelinoLuz
Siyethemba ukuthi uqhuba kahle kulenyanga ka-Ephreli esazamazama ukwakheka kwethu ngokomzwelo, ngokomzimba nangokwengqondo nokuthi uyakwazi ukuzitholela isikhathi sakho, ukuze uphumule, wehlise umoya futhi uvuselele isiqu sakho sonke.
Sithanda ukukwazisa ukuthi sibeke online i-ajenda yokuphathwa kwebanga okuhlinzekwa nguJucelino, ngomhlaka 24 kuJulayi 2021.
Ukuze wenze kanjalo, sicela uye kusixhumanisi esingezansi:
I-Sensee Individuelles – uJucelino da Luz
I-Accueil – uJucelino da Luz
Bese kunezinyathelo ezi-3 zokufeza:
Eyokuqala: beka isikhathi sakho se-slot ukuze uthole ukwelashwa
Okwesibili: Khokha ku-inthanethi ukwelashwa kwakho ngokubuyela ekhasini lokukhokha.
Okwesithathu: thumela ku: contact@jucelinolaluz.fr,: Isithombe sakho sakamuva + sesifiso sakho sokwelashwa okunamandla nokungokomoya ngemisho engu-1 kuye kwemithathu (ubuningi).
Ngokushesha nje lapho sithola imininingwane yakho, sizokuthumela isiqinisekiso sesikhathi sakho kanye nezincazelo zokuqedwa ngempumelelo kokwelashwa kwakho kude.
Uma unentshisekelo, sikumema ukuthi ubhuke ngokushesha, njengoba izindawo zihamba ngokushesha!
Ngemininingwane yakho: ngeke kusabakhona okunye ukwelashwa ngaphambi komhla zingama-24 kuJulayi 2021
Sifisela wena futhi unyaka omuhle kakhulu, othambile futhi okhanyayo